- नेपाली सन्देश शनिबार, साउन २४, २०७७ , 5.4K जनाले हेर्नुभयो
जिल्लाको जलथलमा हत्याको घटनाका एक अभियुक्तलाई झापा प्रहरीले १७ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। स्थानीय बिरिकलाल माझीको हत्याको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा झापा प्रहरीले दुर्गा बहादुर थापा मगरलाई पक्राउ गरेको हो।
२०६०/०७/३० गते हालको झापा गाउँपालिका–४ का ४५ वर्षीय बिरिकलाल माझी छोरीसँग भेटघाट गर्न भनी आएका थिए। उनी सोही दिन साँझ ७ बजेतिर घुमफिर गर्न नजिकैको भट्टी पसलमा पुगे। होटलमा बिरिकलाल माझीले चुरोट मागे चुरोट दिदाँ पसल सञ्चालककी छोरीको हातमा छोएको भन्ने विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो।
सोही बेला होटलमा मदिरा सेवन गरिरहेका साविक जलथलगा.वि.स वडा नं. ८ का दुर्गा बहादुर थापा मगर र खेम फुयाँललगायतका व्यक्तिले बहिनीको हात किन समातिस् भन्दै निहु खोज्दै बिरिकलालमाथि सामान्य कुटपिट गरेका थिए।
कोइरालका अनुसार हाल पक्राउ परेका दुर्गा बहादुर थापा मगर समेतका ३/४ जना पुन घरमै गई बिरिकलाल माझीलाई होटलमा भएको विवादकै विषयमा तँलाई मार्छौ भन्दै पुगे। त्यसपछि चिरपट दाउरा र छालाको बुट जुत्ताले हानेर उनलाई सख्त घाइते बनाएका थिए। घाइते बिरिकलाललाई मेची अञ्चल अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्दा पनि ठीक नभएपछि २०६०/०८/०४ गते बिहान कुटपिटको चोटकै कारण बिरिकलालको मृत्यु भएको थियो।
त्यति बेलै मृतकका ससुरा बिष्णुलाल माझीले कुटपिट गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। लामो समय सम्म फरार रहेका प्रतिवादीहरु दुर्गा मगर समेतको नाममा जिल्ला अदालत झापाबाट २०७७/०१/३० गते पक्राउ अनुमति लिई प्रहरी निरीक्षक साकार राजपन्तको टोलीले २०७७/०४/२२ गते झापा मेचिनगर न.पा वडा नं. १२ स्थित शहरेडाँगी स्थित आफन्तको घरमा लुकिछिपि बसिरहेको अवथामा पक्राउ गरेको प्रहरी प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए।
फरार मगर काठमाडौं, भारतको कोलकत्ता, दार्जिलिङका साथै मलेसिया, युएई गएर लुक्दै आएका थिए। उनी नेपालमा हुँदा पनि आफन्तहरुका घरमा लुकीछिपी बस्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
निजलाई पक्राउ गर्नसाथ घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्सी समेत रहेका जाहेरवाला मृतकका ससुरा बिष्णुलाल माझीले यतिका वर्ष नभेटिँदा पक्राउ पर्नेमा आश मारेको जानकारी दिए। अब हत्यामा संलग्न अन्य पनि पक्राउ पर्ने विश्वास रहेको उनले बताए।
अभियुक्तलाई पाँच दिन म्याद थप गरी हाल अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको हिरासतमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिए। फरार रहेकाहरुको पनि खोजीकार्य जारी रहेको थापाले जानकारी बताए। source:annapurnapost